၆သန်းပြည့် ဖောက်သည်တော်ဖြစ်သူ - Malaysia မှ Muhammad Nazmie Azri Bin Ahmad Zaidi နှင့် တွေ့ဆုံလိုက်ပါ!
မင်္ဂလာပါ FBSမိသားစုဝင်တို့ရေ! ဒီနေ့ကတော့Muhammad Nazmie Azri Bin Ahmad Zaidi ဆိုသူက FBSနှင့်ပူးပေါင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ကံကောင်းစွာနှင့် ၆သန်းပြည့်ထရိတ်ဒါ ဖောက်သည်တော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်! ကံထူးရှင်အတွက် အံအားသင့်ဖွယ် စီစဉ်ပေးသွားမှာပါ! Malaysia မှ Muhammad Nazmie Azri Bin Ahmad Zaidi ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပြီး အကျိုးအကြောင်းပြောပြထားပြီးပါပြီ.